မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] - Page 6
251 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th December 2009, 8:17 pm
ကိုလူမုန်း ပိစိ လဲ မသိတာရှိရင်မေးမှာပါ။
252 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th December 2009, 8:51 pm
နာမည်ကြားရတာ အားရှိစရာကြီး ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ
253 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 12th December 2009, 8:59 pm
254 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th December 2009, 10:25 am
ကြိုဆိုပါတယ် ကို milo သိတာလေးတွေလည်းမျှပါအုံးဗျို့ ......
255 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th December 2009, 10:41 am
မင်္ဂလာပါ တစ္ဆေကြီး MMITR မှလဲ လေးစားပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.]
256 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 13th December 2009, 7:53 pm
မင်္ဂလာပါ ကို လူမုန်း ..
ကျနော်လည်း ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ ..
ကျနော်ကတော့ မမုန်းဘူးနော် .. ချစ်မှာ ဟီး .. (software ကောင်းကောင်းလေးတွေ share ရင်) [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
257 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 14th December 2009, 5:30 pm
မင်္ဂလာ ဘာာာာာာာာာာာာာာာာာာ ( R ကြီးလေသံ ) [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ကျွန်တော်ကတော့ အဖတ်သမား ခင်ဗျ.. လိုက်ဖတ်နေရရင်ပျော်ရောပဲ ... ကောင်မလေးတွေ အပါအဝင် [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ခုလို ဖိုရမ်မှာ တွေ့ ဆုံရတဲ့ သူအားလုံးပဲ .. မင်္ဂလာပါ
အဆင်ပြေရင်လက်ခုပ်သံကြားချင်တယ်... ရွီး..ဖြောင်း..ဖြောင်း [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] ပေါပါ့ (အားပေးတာ.. အဲ့လို) [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
258 မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ on 15th December 2009, 11:53 am
259 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th December 2009, 4:02 pm
MITR မှ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
260 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th December 2009, 4:13 pm
lichinghwee wrote: MITR မှ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
261 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th December 2009, 4:33 pm
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ မသိတာလေးတွေမေးရင်း သိတာလေးတွေလဲပြောခဲ့ ပါအုံး။
262 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th December 2009, 4:35 pm
connection ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ မသိတာလေးတွေမေးရင်း သိတာလေးတွေလဲပြောခဲ့ ပါအုံး။
263 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th December 2009, 6:02 pm
connection ဆိုလို့ လာကြည့်တာ .. ဟီး .. ကြိုဆိုတယ်ဗျို့  ..
264 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th December 2009, 6:04 pm
ကြိဆိုပါတယ်ဗျို့  .. MITR ကနေ .. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
265 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th December 2009, 7:12 pm
266 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 15th December 2009, 8:36 pm
၀င်လာချင်း အသုံးဝင်တဲ့ postလေးတွေတင်ပေးခဲ့တာကြောင့်ပိုပြီးကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ နောက်လည်းဆက်ဆွဲနော် POST ကိုပြောတာ
267 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 17th December 2009, 8:28 am
ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကို။ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ ဖိုရမ်မှာ အသုံးတည့်တဲ့ ပို့စ် လေးတွေ တင်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လဲတင်ပေးပါဦးဗျာ။
268 မင်္ဂလာပါ on 17th December 2009, 12:44 pm
အခုမှ ဒီ forum ကို စပြီးရောက်လာတာပါ။ အပေါင်းအသင်းမရှိသေးလို့ ကူညီမိတ်ဆက်ပေးကြပါဦးနော်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဖိုးနန္ဒပါ။ IT ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလေ့လာသူအဆင့်ဘဲရှိပါသေးတယ်။ အလုပ်အကိုင်ကတော့ AutoCAD operator ပါ။
အသိပညာအတတ်ပညာများ အပြန်အလှန် မျှဝေကြမယ်နော်။
269 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 17th December 2009, 6:23 pm
Pho Nanda wrote: အခုမှ ဒီ forum ကို စပြီးရောက်လာတာပါ။ အပေါင်းအသင်းမရှိသေးလို့ ကူညီမိတ်ဆက်ပေးကြပါဦးနော်။
လေ့လာသူအချင်းချင်း တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ကျနော်တို့ အားလုံးလည်း လေ့လာသူတွေပါ။
သိထားတဲ့ ပညာရပ်တွေကို မသိသူတွေအတွက်မျှဝေရင်း ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း မသိတာလေးတွေကို မေးရင်းနဲ့ ရင်းနှီးစွာနေကြတာပေါ့
270 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 17th December 2009, 7:52 pm
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ .. ဟိ ဟိ အတော်ပဲ autocad အကြောင်းတွေ ရေးဖို့ လူရှိပြီ .. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
271 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th December 2009, 8:42 am
၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ် ကိုဖိုးနန္ဒ။ AutoCAD မှာရေးဖို့လူနည်းနေတာ။ အခုတော့လူရှိပြီ။ အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျ။ သိထားတာလေးတွေမျှဝေပေးရင်း ဖိုရမ်မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ။ မသိတာတွေလဲမေးပါ။ သိသလောက်ဖြေကြားပေးဖို့ကို ကတိပြုပါတယ်။
272 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th December 2009, 4:37 pm
ကိုဖိုးနန္ဒ ရေ ကြိုဆိုပါတယ်ကွာ။ ကိုယ့် ညီအကိုတွေလို သဘောထားပြီးမေးမြန်း ဖြေဆိုနိူင်ပါတယ်ကိုသိတာလေးများကိုလည်း။ ကိုဖိုးနန္ဒ သိတာကျွန်တော်တို့ လည်းအကုန်သိမှာမဟုတ်
တဲ့ အတွက်သိတာလေးများကို မျှဝေပေူပါဗျာ။ thank ပါ။
273 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 18th December 2009, 8:27 pm
ကြိုဆိုပါတယ် ဖိုးနန္ဒ ဖိုရမ်မှာအဆင်ပြေပါစေ
274 မျှော်လင့်ချက် ခင်မင်ခွင့်များ on 19th December 2009, 8:53 am
ကျွန်တော် ပို့ လေးကို ၀င်ဖတ်ပေးလို့အရင်ဆုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
ကျွန်တော်က infohunter ပါ ခင်ဗျာ ။
သူငယ်ချင်းများနှင့် လဲ ခင်ချင်ပါတယ် ။
ဖိုရမ် founder များကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
မြန်မာနည်းပညာတိုးတက်ရေးအတွက် တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီပါ့မယ် ..
ကျွန်တော့်ထက် သိတဲ့အစ်ကိုအစ်မများကလဲ .. ၀ိုင်းဝန်း ကူညီပြသပေးကြပါ။
275 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th December 2009, 9:46 am
မင်မင်တွေ လာရင်လဲ ကြိုဆိုပါလိမ့်မယ်ဗျာ
276 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th December 2009, 10:02 am
နစ်ကို mmso , mz တို့မှာ မြင်ကတည်းက သတိထားမိနေတာ
277 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 19th December 2009, 6:13 pm
278 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th December 2009, 8:50 am
279 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th December 2009, 10:26 am
ကျနော်လည်း ကြိုဆိုပါတယ် ဗျာ .. [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
ဒီမှာလည်း ကူညီနော် .. [You must be registered and logged in to see this image.]
280 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 20th December 2009, 5:19 pm
infohunter wrote: မင်္ဂလာပါ
ကဲကဲ အစကတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာ.. အခုတော့ ကြိုဆိုလိုက်ဦးမယ်။
Warmly Welcome ပါဗျာ။ Post လေးတွေ ပြန်ရေးဦးနော်။
အကောင့်တွေ စွတ်လုပ်မနေနဲ့.. ဘန်းပစ်မယ်.. ဘာမှတ်လဲ.. ဟိဟိ စတာနော်။
281 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 21st December 2009, 9:50 am
တတ်လဲတတ်နိုင်လွန်းတဲ့။ ဟိုအကောင့်ဆိုလဲ သူပဲ။ ဒီအကောင့်ဆိုလဲ သူပဲ။ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
ဘီယာဆိုင်မလာတဲ့ကိစ္စတော့ သိပ်ကြည်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ သေသေချာချာချိန်းပြီးမှ လစ်သွားတာ။
ဟိုသူတော်ကောင်း မောင်ဟာသ လေးကိုလဲပြောလိုက်။ ဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီ လို့။ (သေခန်း)
282 ကျွန်တော် လည်း အသစ်ပါပဲ။ on 23rd December 2009, 9:33 pm
forum နာမည်ကိုသိနေတာကြာပြီဖြစ်ပေမယ့် အခုမှပဲ ဝင်နိုင်တော့တယ်ဗျာ။
283 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th December 2009, 7:28 am
MITR မှ ကြိုဆိုပါတယ်
284 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th December 2009, 9:13 am
အစ်ကို့နာမည်ကိုလည်း ဘယ်မှာ ကြားဖူးနေလည်းမသိဘူး။
Active Member တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ပေးဖို့လည်း တစ်ခါတည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဗျာ။
285 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th December 2009, 2:09 pm
privatene0 nice to see with you friend.... welcome from mmitresource ..
286 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th December 2009, 5:00 pm
$ƴǩǾ wrote: မင်္ဂလာပါဗျာ။
ကြားဖူးမှာပေါ့ငါ့ညီ။ MCO မှာဖြစ်မှာပေါ့
287 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th December 2009, 6:17 pm
မင်္ဂလာပါဗျာ .. ကျနော်လည်း ကြိုဆိုပါတယ်နော်
288 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th December 2009, 7:08 pm
289 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 24th December 2009, 7:45 pm
290 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 30th December 2009, 11:45 pm
291 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 31st December 2009, 7:38 pm
မင်္ဂလာပါ ကိုပိုးဟတ်ဖြူ။ကျွန်တော့်ကိုလည်း ခင်နိုင်ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
292 မင်္ဂလာပါ on 6th January 2010, 10:37 am
အခုလို မြန်မာအိုင်တီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖိုရမ်ကို တည်ထောင်ပြီး
မန်ဘာများကိုမွေးထုတ်ကာ အိုင်တီနဲ့ပတ်သတ်သမျှ အခက်အခက်များကိုဖြေရှင်း
အသစ်အဆန်းများကိုမျှဝေ နွေးထွေးနိုင်သမျှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုတဲ့ ဒီဖိုရမ်ကြီးနဲ့
မန်ဘာများအားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်
ကျွန်တော်သိတာ တတ်တာ ဘာမှမရှိသေးပါဘူး [You must be registered and logged in to see this image.] ၀ါသနာကတော့ အိုင်တီနဲ့ပတ်သတ်တာ အကုန်
၀ါသနာပါတယ် ပရိုဂရမ်ရေးတာ ဘာညာ သာရကာ ပေါ့
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လုပ်နေတာက video edit (သိသလောက်လေးနဲ့ညာစားနေတာ)
အဲဒီတော့ video edit နဲ့ပတ်သတ်လို့လဲ သိလိုသည့် / သိစေလိုသည့် အကြောင်းအရာများကို
ကျွန်တော့်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးနိုင်/ပြောပြနိုင်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်သိတာကိုလဲ မချွန်းမချန် ပြောပြပေးပါမယ်လို့ ကတိပြုပါတယ်
293 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th January 2010, 11:04 am
ကျနော် အရင်ဆုံး ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျို့  [You must be registered and logged in to see this image.] ဖိုရမ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်စွာ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါစေဗျာ .. [You must be registered and logged in to see this image.] ကူညီမယ့်လူတွေလည်း အများကြီးပါ .. [You must be registered and logged in to see this image.]
294 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th January 2010, 3:09 pm
MITR က နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။
Video Edit နဲ့ပတ်သက်လို့ သင်တန်းပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။(ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှအတိပူးနော်)
295 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th January 2010, 4:47 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] @ ညီလေးရေမင်္ဂလာပါကွာ ။ ငါ့ ညီသ်ိချင်တာလေးတွေမေးရင်းသင်ရင်းနဲ့ 
Forum ကညီအကို မောင်နှမများကိုလည်း ညီလေး သိတာလေးတွေ လမ်းညွုန်ပေးပါကွာ။
296 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th January 2010, 6:30 pm
အစ်ကိုရေ...မင်္ဂလာပါဗျာ...Video edit ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသွားပြီ...ဖြစ်နိုင်ရင် Video edit နဲ့ပါတ်သက်တာလေးတွေ ရေးပေးပါလားဗျာ...
297 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th January 2010, 8:01 pm
မသိတာတွေလည်းမေးပေါ့ ပြီး သိတာလေးတွေကိုလည်း မစခဲ့ပါဦးနော်
ကျွန်တော်က တော့ video editing ဆိုရင်လေ ဟို transformer ကားထဲကလို့ animation တွေလိုလုပ်ချင်တယ်
အားရင်လည်းစောစောက attacker ပြောသလို စာတန်းထိုးလေးလောက်သာ ရေးပေးရင်လည်းရပါတယ်
298 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 6th January 2010, 8:05 pm
Хакер-истребитель wrote: အခုလိုမျှဝေမယ့်လူတစ်ယောက်ရှိတော့ပိုပြီးတော့အားတက်သွားပြီဗျာ
ဘုရားဘုရား...sqam သဘောမျိုးဖြစ်သွားရင်တော့ sorry ပါ...ကိုမြိတ်ရယ်...သူများတွေ Stick man ကိုမနည်းလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ သူက Transformer ထဲက Animation ဆိုပါလား... ကိုမြိတ်လဲ Video editing ရတယ်ထင်တယ်...၀င်ရေးပေးနော်..ကျွန်တော်အခု Animation သေး၂ လေးတွေလုပ်မလို့
299 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 7th January 2010, 3:00 pm
ကျနော် အရင်ဆုံး ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျို့  [You must be registered and logged in to see this image.] ဖိုရမ်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်စွာ လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါစေဗျာ .. [You must be registered and logged in to see this image.] ကူညီမယ့်လူတွေလည်း အများကြီးပါ .. [You must be registered and logged in to see this image.]ဟုတ်ကဲ့ အခုလို နွေထွေးစွာ ကြိုဆိုတဲ့အတွက် အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
Video Edit နဲ့ပတ်သတ်လို့ အများကြီးတော့ မရေးနိုင်ပါဘူး(မာနခံတာ ဟီး)
ရေးနိုင်သလောက်တော့ ရေးပါမယ်။ ဖိုရမ်စာမျက်နှာချွေတာရာလဲရောက်အောင် ကျွန်တော်လဲအချိန် (အင်တာနက်သုံးချိန်) သက်သာအောင် PDF ဖိုင်လေးတွေနဲ့ တင်ပေးပါမယ်
transformer ကားထဲကလို့ animation တွေတော့ မလုတ်တတ်ပါဘူးဗျာ
သာမန် အလှူ မင်္ဂလာဆောင် လောက်ပဲ ရိုက်တိုက် တည်းဖြတ်တတ်တာပါ
အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုပဲ မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ် (ကျန်တာတွေက မသိလို့ပါ)
တကယ်လို့ အစ်ကို့အနေနဲ့ video editing အကြောင်းကို အင်တာနက်ဂျာနယ်မှာ
ရေးသွားတာလေးရှိပါတယ် ။ အစ်ကိုမဖတ်ရသေးဘူးဆိုရင်
ကျနော်တို့ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဗျာ ပညာဆိုတာ ပိုတယ်မရှိပါဘူး တချို့အရာတွေက သိသလိုလိုနဲ့ မသိတာတွေများနေတတ်ပါတယ်
မန်ဘာများအနေဖြင့် မင်နီကို လုံးဝမသုံးပါနဲ့ခင်ဗျာ ။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ မန်ဘာများကို သတိပေးသောအခါများတွင်မှသာ မင်နီကို သုံးပါသည် ။
300 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 7th January 2010, 3:21 pm
301 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting] on 7th January 2010, 3:49 pm
06.01.2010 ရက်နေ့က Register လုပ်ပြီး 07.01.2010 ရက်နေ့မှာ Post 8 ခုရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ ကိုနိုင်သူရ
အား MITR Forum မှ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ အရမ်း Active ဖြစ်တဲ့ Member တစ်ယောက်တိုးလာပြီလို့ပဲ သတ်မှတ်လိုက်ပါ့မယ်။ အစ်ကိုနားလည်သလောက်လေးပဲ သင်ပြပါခင်ဗျာ။
302 Re: မနျဘာမြား နုတျဆကျခနျး [Greeting]